Xoosh “Jawaari wuxuu la saftay Madaxweynaha, illaa iyo hadana Baarlamaanka ma furin”
Xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa ku eedeeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka inuu gabay howshiisa, isla markaana wax ka maleegay waxa uu ugu yeeray sharci darradii uu Madaxweynaha ku meel mariyay hanaanka doorashada.
Xildhibaan Jeesow oo ugu baaqay Gudoonka Baarlamaanka inuu wax ka qabto Xildhibaanada qaska wada
New America Media • News Report • November 21, 2014
Xildhibaan Dahir Amiin Jeesow oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka ee mooshinka ka wada Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inay ka sugayaan Gudoonka Baarlamaanka inay go’aan ka qaataan Xildhibaanada wali qaska ka wada fadhiyada Baarlamaanka.
Xildhibaan Warbixin Xasaasi ah ka qoray EBOLA-ha siyaasadeed ee ka taagan Dalka Soomaaliya!!!
Labadii todobaad ee ugu dambeysay qaranka Soomaaliyeed wuxuu la il daran yahay EBOLA siyaasadeed, jaah wareer Dastuuri ah, loollan awoodeed iyo ifafaale is-riix-riix aan dalka iyo dalkiisaba dan u aheyn! Waxa bannaanka yaalla hardan iyo qab, dhanba, dhanka kale ku taamayo inuu ku muquuniyo! Waxaad mooddaa, in laga tagayo, waxa la Isku haayo wax ka weyn, ka mudan, kana nuxur sarreeya, waxa fadhiid ah adeegyadii bulshada, Waxaan muuqan u danqasho kuwa abaaraha iyo colaadaha la dhalbar jaban ee kuweennii ay ka dhur sugayeen Isku mashquulnay halkii aan u gargaaristooda iyo u adeegiddooda aan ku mashquuli laheyn!
XILDHIBAAN C/SAMAD: Isbedelka hay’adaha amniga waa in Madaxweynaha...
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga dowladdii KMG ahayd xildhibaan Cabdisamad Macallin Maxamuud ayaa sheegay in wax is-bedel ah aanay soo kordhinayn is-casilaadii wasiirkii amniga Qaranka, isagoo xusay inaysan jirin wada-shaqeyn u dhexeysa hay’adaha amniga oo dhan.
Xildhibaan C/samad "Hadii uu Madaxweynaha aqbali waayo dalabkeena go'aan dastuuri ayaa qaadaneynaa"
Xildhibaan C/samad Macalin Maxamuud oo ka mid ahaa Xildhibaanada Baarlamaanka ee u diray Madaxweynaha baaqa ah inuu is casilo ayaa sheegay in hadii uu aqbali waayo ay qaadan doonaan go'aan rasmi ah.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka ka badbaaday isku dil oo lagu qaarijin lahaa
Xildhibaan C/llaahi Axmed Coonka oo ka mid ah xubanaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka badbaaday isku day dil oo lagu qaarijin lahaa kaddib markii miino loogu xiray gaarigiisa.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble oo ka hadlay Howlgalka Ciidamada AMISOM
Guddiga Arrimaha dibadda Baarlamaanka oo walaac ka muujiyay Xaalada Soomaalida Sacuudiga
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay tacadi badan ku jiraan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Sacuudiga oo mudooyinka danbe ay ka soconayeen qaqabashada dadka ajaaniibta ah ee aan u dhalan wadankaasi